Maalgalintaada ganacsiga ee Forex Maalgelinta Xisaabaadka Hababka FXCC
Bixinta / Ka noqoshada
Waqtiga Hawlgalka *
1 saac 5-10
iibiyey HADDII MUDDADA
Max (Kaarka Per) - Maalin kasta $ 5,000 -Waa $ 20,000
Max ilaa inta ay tahay lacagta asalka ah
Maalmaha la nadiifiyo 5-7
Kharashka USD HADDII MUDDADA
Max Maya Qadarka ugu badan
1 saac 2-5
laga bilaabo CNY) HADDII MUDDADA
Max Xadka kaarka bankiga
Min ¥ 100 beddelaad kasta
Max ¥ 100000 beddelaad kasta
1 saac Real
Max Xadka koontada shakhsiga ee macmiilka
1 saac 7 shaqeeya
maalmood si loo cadeeyo Zero
maalmood si loo cadeeyo 7 shaqeeya
xoqin HADDII MUDDADA
Min 10 xoqin
Max 600,000 xoqin
Max 500,000 RUB halkii macaamil ganacsi
FXCC ** EUR, GBP HADDII MUDDADA
* Hawlgallada Inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah
Iyada oo qayb ka ah himilooyinkeena joogtada ah ee macaamiishayada, waxaan soo bandhigeynaa "lacag dhigashada khidmadaha" eber! Taas macnaheedu waa in FXCC ay ku bixin doonto si buuxda ama qayb ahaan khidmadaha deebaajiga ee ay ku soo dalacday processor-bixiyeha marka aad lacag noogu siiso hababka lacag bixinta ee la aqbali karo ee FXCC.
Qaddarka ugu badan ee khidmadda deynta ee ay bixiso FXCC waa 100 qaybood oo lacag ah marka loo eego wadarta khidmadaha deebaajiga ee ay soo rogtay PSPs macmiil kasta.
FXCC waxay si gooni ah u soo celin doontaa lacagta khidmadda macaamilka ee dhigaalka lagu maalgeliyey hababka lacag bixinta ee la aqbali karo ee FXCC.
FXCC waxay xaq u leedahay inay ka saarto khidmadaha la soo celiyey haddii ay dhacdo dalabka ka bixitaanka oo aan ku filnayn ama aaney jirin howlo ganacsi oo horay loo qabtay.
*** Xaddidaadu waa in loo beddelaa lacagaha u dhigma iyadoo lagu saleynayo sicirka maalin walba
Soo gal & Faa'iidadaada Xisaabaadka ZERO Kharashka
Iyada oo qayb ka ah himilooyinkeena joogtada ah ee macaamiishayada, waxaan soo bandhigeynaa "lacag dhigashada khidmadaha eber" xayeysiin!
SI DEG DEG AH
Haa Looma Diiwaangelin? HADDII HELI
Siyaasadaha shirkadaha FXCC
Lacagta caddaanka ah iyo lacagta dulsaarashada ayaa si gooni ah loogu xisaabin doonaa xisaabtaada ganacsigaaga
Codsiyada dib-u-celinta waxaa loo diri doonaa habka miisaaniyada loo heley iyo tan ugu horreysa qaddarka kaydka. Dakhliga waxaa lagu celin doonaa iyadoo la isticmaalayo Bangiga Wire Transfer
Shirkadda ugu yar ee lacag bixinta ee habka waa $ 50 haddii aan si kale loo cayimin miiska kor ku xusan
Xaddidaadda dakhliga ugu yar waa qadaro isku xigta. Kaydka ugu horeeya ee lagu sameeyay FXCC waa in ay tixgeliyaan nooca xisaabta ee ugu yar
Nidaamka kale ee lacag bixinta, FXCC ma dejin lacagta ugu badan ee banki. Wixii su'aalo ah ee arrintani waa in lagu hubiyaa bixiyaha habka bixinta
Siyaasadda Soo celinta: Dhammaan lacagaha loo diro xisaabta Client waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kama dambeys iyo aan la soo celin karin. Dhammaan lacagaha la soo saaro waa in la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo nidaamka ka-noqoshada Waaxda Maaliyadda ee FXCC. Haddii ay dhacdo in lacagtu ay hoos u dhacdo FXCC ama kiis gaar ah, dib u soo celin ayaa lagu sameyn karaa iyada oo laga codsanayo hay'adda Credit / Debit Card, kaarka Kaarka Amaahda / Debitka kaas oo kaashka lagu dhigay